[SAADAAL]:-Duufaan Ku Soo Waajahan Dalka Soomaaliya Iyo Xilliga La Filikaro
Wednesday October 10, 2018 - 14:21:22 in Wararka by Abdi A.
Somaliya-(Caalami-News)-Qaybta saadaasha hawada ee BBC ayaa sheegtay in ay samaysmayso duufaan xoog leh oo ka soo abuurmaysa badda Arabia.
Duufaantan oo loogu magac daray Luban ayaa la filayaa in ay ku dhiufato waddanka cumaan Jimcaha, ka hor inta aysan garaacin Sabtida dalka Yemen,oo aysan ku xigsiinSoomaaliya. Waxaa la sheegayaa in roobab aad u xoog leh ay wadato.
Xarunta digniinta ka bixisa duufaannada ee Maraykanka ayaa sheegaysa iyadana in heerka duufaantan uu yahay heerka 1aad. Marka ay gaadho Yemen iyo Cumaan waxay xaruntu sheegaysaa in la fili karo in xoogeedu uu yaraado.
Bishii Maarso ayey ahayd markii duufaanta Mekunu ay ku dhufatay Cumaan
Laakin roobabka xoogga leh ayey sheegtay in ay dhalin karaan daadad khatar gelin kara qaybaha ay ka marayso dalalka ay ku wajahan tahay.
"Waxaa kaloo macquul ah in Luban ay galbeedka sii aaddo oo ay u gudubto gacanka Cadmeed" ayey tidhi xaruntu.
Duufaantan Luban ayaa lagu wadaa in ay cirifka bari ee Soomaaliya ku dhufato saacadaha hore ee Axadda, ayadoo dabaylahana la qiyaasayo in xoogoodu uu noqon doono kuwo ilaa 60 mayl saacaddiiba ku socda.
Xilliga ay Soomaliya ku soo beegan tahay awoodeedu way yaraan doontaa